नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अर्घाखाँची महोत्सवमा भाषण गर्दा गर्दै माओवादी नेता यसरि लखेटिए ! बल्ल बल्ल प्रहरी र सुरक्षा गार्डले यसरी बँचाए माओवादी मन्त्री र नेतालाई । हेर्नुस त्यहा के भएको थियो सबै भिडियोहरु ! उठ जनता यसै गरी उठ अबत अती भो !!!!
अर्घाखाँची महोत्सवमा भाषण गर्दा गर्दै माओवादी नेता यसरि लखेटिए ! बल्ल बल्ल प्रहरी र सुरक्षा गार्डले यसरी बँचाए माओवादी मन्त्री र नेतालाई । हेर्नुस त्यहा के भएको थियो सबै भिडियोहरु ! उठ जनता यसै गरी उठ अबत अती भो !!!!